Nyefee site na PubPub - AfricArXiv
Nyefee site na PubPub
Bipụta, ọrụ flagship nke Ihe Ọmụma Ihe Ọmụma, ebido n’afọ 2017. Ebe a na-emepe emepe akwụkwọ na-akwado ọtụtụ akwụkwọ ọgụgụ ndị tụlere agụmakwụkwọ na akwụkwọ sitere na mahadum na ndị na-ebi akwụkwọ n’etiti ọha mmadụ, na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu puku akwụkwọ ndị mepụtara na ndị ọkà mmụta n’otu n’otu na agụmakwụkwọ ngalaba. PubPub jikọtara usoro nke okike ihe ọmụma site na ijikọ mkparịta ụka, ịkọwapụta, ma depụta ya na mbipụta dijitalụ dị mkpụmkpụ ma dị ogologo.
Ọ bụrụ n’ịrụ ọrụ, na-arụ ọrụ ugbu a, ma ọ bụ na-ezube ịrụ ọrụ na nyocha metụtara ọrịa coronavirus ma chọọ inye onwe gị, biko soro ntuziaka ndị a.
1. Ndekọ Video gị
Biko kwupụta otu nchọta ma ọ bụ isi ihe akọwapụtara.
Kwupụta aha gị, njikọ gị, ọzụzụ na obodo gị.
Kwurịtanụ ihe ọmụma dị mkpa ị nwetaworo ma ọ bụ nwee olile anya inweta n’ọrụ gị, gụnyere usoro na ụzọ sayensị.
Mee ndumodu sitere na mmechi ma obu ihe nd ii kwuru. Ọ bụrụ na ọ ga - ekwe omume, biko tinyekwa onye ga - achọta ọrụ a kachasị mkpa (mpaghara ndị ọzọ gbasara nyocha ma ọ bụ ọrụ na - aga n'ihu, ndị nwere ike ịmekọrịta).
Kwute 3 ruo 5, gụnyere nke gị. Biko nye nkwado zuru oke (aha ndị edemede, afọ mbipụta, aha akwụkwọ, isiokwu edemede) maka ndị otu anyị ga-achọpụta. Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, tinye doi nke abụọ n'ụdị nrubeisi.
Kwupụta na ikwenye ịkekọrịta ihe ndekọ a n'okpuru a Ikikere CC-BY.
2. Idenye ndekọ gị
Biko jiri ụdị. Gbalia jupụta mpaghara niile achọrọ ma bulite ndekọ gị. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ma ọ bụ nsogbu ọ bụla, biko kpọtụrụ: info@africarxiv.org
Biko gụọ ntuziaka anyị tupu ikwenye, gbaa mbọ hụ na ị na-agbaso usoro nyocha ma nye ozi niile dị mkpa na ederede gị.
3. Ihe ichere
Mgbe itinyechara ndekọ gị nke ọma, ịnwere ike ịtụ anya ịnụ olu anyị site na ụbọchị ise.
Ọ bụrụ na anabatara gị, a ga-edenye ntinye okwu gị yana ntụnyere ndị dị mkpa ga-agbakwunye. A ga-eziga faịlụ ọdịyo / ihe na ntanetị na AfricanArXiv PubPub nchịkọta ya na Crossref DOI na CC BY 4.0 attribution license .. A ga-ebugo faịlụ ederede na otu n'ime nyiwe mmekọ nke AfricaArXiv (OSF, ScienceOpen, ma ọ bụ Zenodo).
Anyị ga-agbakwunye ntụgharị AI / igwe nke ederede ahụ n'asụsụ 2-3 ọzọ ma ọ bụrụ na igosipụta nke ọ bụla na ntinye gị yana ọkachasị ma ọ bụrụ na asụsụ ụfọdụ dị mkpa ịgụnye n'ihi ọnọdụ mpaghara.
N'ọnọdụ nsogbu ọ bụla, ajụjụ ma ọ bụ nchegbu, email: info@africarxiv.org
Ihe Ọmụmụ Ihe Ọmụmụ Ihe Ọmụma na AfrịkaArXiv weputara Ihe nlere Audio / Visual Preprint Repotitory na PubPub
Ihe Ọmụma Ọdịnihu & AfricaArXiv	 23B April 2020	 Enweghị asịsa
PubPub, ikpo okwu mmekorita nke uzo nke Knowledge Futures Group wuru, ya na AfricaArXiv emekorita ya, ihe ntinye akwukwo ndi Afrika, iji kwado ihe ndi ozo. Mmekọrịta a…